अन्तराष्ट्रीय मानवता समूहका जन्मदाता एचबी ताम्राकारको बरफ बेच्नेदेखी संयोजक सम्मको यात्रा (संघर्षशील यात्रा)
नेपालको कंञ्चनपूर जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा जन्मिएका एचबी ताम्राकार कृष्णपूर नगरपालिका वडा नं ७ का युवा हुन् । २०४६ साल फागुन २४ गते बुधवारका दिन जन्मिएका यि युवा कृष्णपूर नगरपालिका को मध्यमवर्गीय परिवार का सिद्धाराज ताम्राकार र तुलसी ताम्राकारको जेठा छोरा हुन् ।बाल्यकाल कंञ्चनपूरको कलुवापूरमा विताएका ताम्राकारले जिवनमा धेरै उकाली-ओराली हिड्नुपर्यो ।सानैदेखी नरम स्वभाव र उच्च विचार उनमा झल्किन्थ्यो ।उनका आमा र बुवा जागीरें थिएनन तर बुवाको टेक्निकल सिपले नै परिवारको आवश्यकता पुर्ती हुन्थ्यो ।
परिवारमा २ वटा छोरा र २ वटी छोरी भएकाले सवैको आवश्यकता पुरा गर्न उनका वुवा सुद्धराजलाई धौधौ नै थियो । केही जमिन र घर थियो तर आउने आर्थीक स्रोत शुन्य भएकाले एचबी ताम्राकार सरकारी स्कुल जान बाध्य भए ।कक्षा ८ को परिक्षा नजिकिदै गइरहेको थियो । उनले फ़ी दिन नसकेका कारण परीक्षामा बस्न नपाउने कुरा आफ्नो आमालाई रुदै सुनाए । बुवा भारतमा थिए ।त्यति राम्रो कमाई थिएन । त्यसपछी , उनकी आमाले आफ्नो घाटीको मंगलसूत्र बेचेर छोरालाई पढाउन्छु भन्दै बेच्न पुगिन् । यो कुरा सम्झेर उनि आजपनि भावुक हुन्छन् । उनले कृष्णपूर नगरपालिका कै विणा माध्यमिक विधालयबाट एसएलसी पास गरे । मिहिनेती विधार्थीको रुपमा परिचित ताम्राकारले एसएलसीको टेस्ट परिक्षामा सवै विधार्थीहरुलाई पछाडी पार्दै प्रथम भएका थिए । त्यसपछी, उनि कैलालीको सरस्वती नमूना कलेजमा प्लस टु मा भर्ना भए । उनले त्यहाबाट पनि जेहेन्दार अनि आर्थीक हिसावले कमजोर विधार्थी भएको भन्दै SFAFDB ( Student Financial Assistance Fund Development Board) बाट ४०,००० आर्थीक सहयोग प्राप्त गरे ।
यो रक़म उनको जिवनकै ठुलो रक़म थियो । यसले उनको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना पनि पुरा भयो । त्यसपछी , उनले यसै रकमबाट वर्ष को १३००० काठ्माण्डौको डल्लुमा अवस्थित रेन्बो अन्तराष्ट्रीय कलेज मा तिर्नेगरी ३ वर्ष को कोर्स पुरा गरे । उनलाई कलेजले फ़ी कहिले दिने हो भनेर भन्दा , एसएफएएफडिबी बाट प्राप्त भएपछी दिन्छु भन्दै कलेजमा मानाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर, ताम्राकारले जिवनमा कहिलै हार खाएनन् । उनले कंञ्चनपूर मा बस्दा बर्फ़ पेटी साईकलमा पछाडी राखेर अत्तरिया, ओलानी, चौकीडाडा , गजरौला , मौरीफाटा हुदै कलुवापूर पुगेर पुन: अत्तरिया गएको अनुभवपनि सुनाए । तर, हरेक काम को महत्व हुनुपर्छ । काम गरेर मान्छे सानो हुदैन् भन्ने स्वभावका उनी स्कुलमा अध्यापन गराउने गर्थे । उनले माउन्ट ओलीभ र ब्राडफोर्ड अन्तराष्ट्रीय स्कुलमा पढ़ाए । काठमाण्डौ जस्तो महङ्गो अनि घना शहरमा उनले धेरै संघर्ष गरेका थिए । विहान कलेज , दिउसो स्कुल पढाउन , साझ कोचिङ् पढाउन हिडेर कलंङकी बाट सोर्ह्रखुट्टे सधै धाउन्थे । काठ्माण्डौमा टिकाउन उनले हरसम्म् प्रयास गरे ।
उनले विजुलीको पसलमा काम गरे । जिनेटर जडान गर्न धेरै घरहरु गएको अनुभवपनि सुनाए । सिटी भ्यु अपार्टमेंटमा उनले हतौडाले डिभी बक्सकोलागि वाल फ़ोरेका थियो । यो भने जस्तो सजिलो पक्कै थिएन । तर, सुन्दर जिवनको खोजीमा उनि हिडीरहे । नौकरीको लागि भौतारिए । तर, कसैले खोजिदिएनन् । उनलाई परिवारको ठुलो आकार , बुवाको टाउकाको भारी कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर मनमा एउटै कुराले ढकढक्याउन्थ्यो । तर, उनले हार मानेनन् । जिवनका हरेक कठीनाईहरुको सामना मन्द मुस्कानसंगै ठोक्काएर गर्थे । ताम्राकार एक मिहिनेती युवा हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । उनले विश्वविद्यालय बाट पहिलो डीग्री पास गरिसकेपछी नेपाल मै पढ्ने की वा विदेश जाने भनेर मनका एउटै कुरा खेलाउन थाले । अन्ततः उनी जापान जाने तयारीमा लागे । सन २०१४ मा जापान होमिए । उनले जापानमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्यो । जापानमा बसेर काम र संचार जगतमा सकृय भएर समय सदुपयोग गर्न थाले । उनले जापानकै कमाईले नेपालमा घर लगाए । धनगढीमा २ कट्टा जमिन पनि जोड़े । परिवारको आर्थीक अवस्था मजबुद हुदै जान थाल्यो ।
उनले परिवारको सवै आवश्यकता पुरा गरे । त्यसपछी , ताम्राकार सामाजिक काममापनि अग्रसर हुन् थाले । धेरै अभियानको नेतृत्व गर्दै धेरै पिडीतहरु घाउमा मल्हम लगाए । जापानबाट सुरुमा बिभिन्न अनलाईनहरुमा आफ्नो लेख दिन्थे । उनका लेखहरु रातोपाटी, सेतोपाटी मा पनि देख्न पाईन्छ । समय बलवान हुन्छ । सन २०१५ बाट ओएसनेपाल मा काम गर्ने अवसर पाए । सुरुमा धेरैले यो बोल्न सक्दैन भन्थे । तर, ओएसनेपाल का सिईओ केश बहादुर कार्कीले अरु कसैका कुरा सुनेनन् । उनलाई हौसला निरन्तर दिए । त्यसपछी बोल्दै जादा ताम्राकार स्पष्ट वक्ताको रुपमा उदाए । सानै उमेरमा यति धेरै प्रगति गरेकी उनलाई सम्झिनेहरु छक्क पर्छन् । उनले जापनको टोकियोबाट International Discourse कार्यक्रम चलाए । आजपनि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण र चर्चित छ ।नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल , माधव नेपाल , लोकेन्द्र चन्द हरु को लिएका छन् । त्यसैगरी, अन्तराष्ट्रीय कलाकार अर्थर गन को पहिलो अन्तरवार्ता लिने व्यक्ति उनै हुन् । भारतिय विजेपी का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व एमएलए डा.विजय जोली लगायत बलीउडकी चर्चित नायिका मनिषा कोइराला को अन्तरवार्ता लिएका छन् ।
नेपालदेखी नेपाल बाहिर सवैसंग संवाद गरेका ताम्राकार एक चर्चित अनुहारको रुपमा स्थापित भएका छन् ।अहिले ताम्राकारले नेतृत्व गरेको पेजमा ५२ लाख जनताले फ्लो गरेका छन् भने उनको व्यक्तिगत अकाउन्ट मा झण्डै ७० हजार बढी जोडिएका छन् । नेपालका , विदेश का चर्चित अनुहार हरु संग प्रत्यक्ष संवाद गरेर नयॉं उचाईमा आफुलाई पुर्याउन सफल भए । जापानमा रहेको सुदुरपश्चिमेली समाज जापानको प्रवक्ता समेत भइसकेका उनले अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री का पूर्व सल्लाकार विजय सापकोटासंग मिलेर काम गरे । ७ लाख अन्तराष्ट्रीय विधार्थी का नेता अर्थात सिसाको अध्यक्ष समेत रहेका विजय सापकोटा को प्रमुख प्रेस सल्लाकार को रुपमा पनि २ वर्ष काम गरे । कुन्चिदो मार्सल आर्ट्स का दुत , पशुपति अन्नपूर्ण आश्रम का अन्तराष्ट्रीय प्रमुख प्रेस सल्लाकार को ज़िम्मेवारी पनि वहन गरिरहेका छन् । उनले जापानबाट गरेको पत्रकारीताले नयॉं तरंङ् नेपाली समाजमा ल्याएको छ । पछील्लो समय ताम्राकारले नेपाल र विश्व जोड्ने अभियान सारेका छन् ।
महामारी संगै भएको लकडाउन का कारण नेपालको जनजीवन प्रभावित छ । यसै समयमा एकदमै नयॉं विचारको प्रयोग उनले गरे । अन्तराष्ट्रीय मानवता समूह (International Humanity Group)को परिकल्पनाकार, जन्मदाता एचबी ताम्राकार यस अभियानको केन्द्रीय संयोजक हुन् । उनको नेतृत्व को यो स्वतन्त्र अभियानले आक्रमक रुप लिएको छ । यो अभियानको केन्द्रीय संयोजक ताम्राकार ले नेपलको झापादेखी कंञ्चनपूर सम्म राहत वितरण गराका छन् । स्वच्छ छबीका ताम्राकार अहिले देश विदेशका अभियनता हरु , पिडीतहरु संग निरन्तर संवादमा छन् । अन्तराष्ट्रीय मानवता समूह ले कर्णालीका ५० जना राउटे घरपरीवारलाई राहत दिएर विश्वभरबाट प्रशंसा प्राप्त गरे ।
उनको नेतृत्वको टिमले नेपालको कंञ्चनपूर, कैलाली , टिकापूर, अछाम , गुल्मी , काठमाण्डौ , पोखरा , कर्णाली, सुनसरी , झापा लगायत ठाउँहरुमा वितरण गरिसकेका छन् । यो ग्रुपले सवै काम गरिरहेको छ । यस ग्रुपमा मनिषा कोइराला , कुलमान घिसिङ्, डा. मान बहादुर विश्वकर्मा , सिव परियार , रेखा थापा , विजय लामा ,दिपक राज गिरी , दिपा श्री निरौला, इन्द्र आर्याल , डा. विष्णु मायॉं परियार , स्कट म्याकलेनन् लगायत धेरै भिआईपीहरु जोडिएका छन् । नेपाल हुदै विश्वका धेरै ठाउँहरुमा संगठन निर्माण भइसकेका छन् । उनी आज एक शक्तिशाली युवाको रुपमा उभ्भिएका छन् ।महान युवा एचबी ताम्राकार निरन्तर सत्कर्मको बाटोमा हुनुहुन्छ । वहालाई जन्माउने आमाबुवालाई कोटीकोटी नमन गर्दै , लाखौ एचबी ताम्राकारहरुको नेपालमा जन्म हुनुपर्छ ।